I-Apple iqinisekisa ngokusesikweni iVenkile entsha ye-Apple eMilan | Ndisuka mac
Kuwo wonke unyaka, sihlala sithanda ukuvuma onke amarhe anxulumene nokuvulwa kwevenkile ye-Apple kwihlabathi liphela, kwakudala ngaphambi kokuba inkampani ngokwayo iqinisekise ngokusesikweni. Izolo ugxa wam uJavier upapashe inqaku ekwazisa ngovulo oluzayo lweVenkile yeApple eMexico, ngakumbi eSan Luis Potosí. U-Apple akakuqinisekisanga ngokusesikweni oku kuvulwa, nangona kunjalo, ikhuphe ingxelo apho yazisa malunga neVenkile elandelayo yeApple eza kuvulwa e-Itali, ngakumbi eMilan, ePlaza Libertad. Okwangoku, asazi ukuba kuvulwe nini ukuvulwa, kodwa kamsinya nje xa sikwenza, siya kukwazisa ngokukhawuleza.
Ekuqaleni konyaka sikwazise ngezicwangciso zikaCupertino ezinxulumene ne-Itali, izicwangciso ezathi iMilan izakuba sisixeko esilandelayo elizweni esinokonwabela iVenkile yeApple. Ukufikelela evenkileni kuya kuba ngezinyuko eziphakathi kweendonga ezimbini ezikhokelela emthonjeniemi phezulu kwivenkile, njengoko sinokubona kumfanekiso ongaphezulu kweli nqaku.
U-Apple uthembele kuNorman Foster kwakhona kunye namaqabane ayo ukwenza uyilo lwaleVenkile intsha ye-Apple, njengakwezinye iivenkile kwaye, kwizibonelelo ezitsha zeApple, iApple Park. U-Angela Ahrendts uthe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukuba iVenkile yeApple iya kuba liziko elinenkcubeko, iyeke ukuba ngumboniso nje okanye iziko loshishino apho iApple ithengisa khona iimveliso zayo.
Kuwo wonke unyaka, iApple iyakulungiselela iminyhadala eyahlukeneyo enomdla kuyo yonke iminyaka, ukusuka kwiiseshoni zeenkampani, ukuya kwiinkqubo zokufundisa abantwana inkqubo, kunye nemiboniso yeefoto kunye noyilo, imizobo, iikonsathi zomculo ... ZiyiVenkile yeApple 3.0.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple iqinisekisa ngokusesikweni iVenkile entsha ye-Apple eMilan
I-Apple Pay izakufika ngokusemthethweni e-Itali ngomso